Madaxweyne Xasan oo mar kale xaqiijiyey inay Somalia iyo Kenya si wadajir ah ula dagaalami doonaan Alshabaab. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Madaxweyne Xasan oo mar kale xaqiijiyey inay Somalia iyo Kenya si wadajir ah ula dagaalami doonaan Alshabaab.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa magaalada Eldoret ee dalka Jamhuuriyadda Kenya kaga qeybgaley baroor-diiq qaran oo loo sameeyay ciidammadii dhowaan Kenya looga dilay degaanka Ceel Cadde ee gobolka Gedo ee dalka Soomaaliya.
Madaxweynaha oo kulankaasi khudbad ka jeediyaywaxa uu shacabka, dowladda iyo madaxda Kenya ugu tacsideeyey Askartii lagu dilay Ceel-cadde, wuxuuna xusay inay Soomaaliya murugada iyo tiiraanyada la qeybsaneyso reer Kenya.
“Waxan halkan u imid inaan idin kala qeybgalo baroor -diiqda loo sameynayo geesiyaashii idinkaga dhintey Soomaaliya, kuwaas oo qeyb ka ahaa hawlgalka lagu nabadeynayo dalkeena. Fariinta aan idin wado waxay tahay inaan idin mahad celiyo, aana idin ku bogaadiyo taageerada aad inoo fidiseen xilli aad u adag. Weligeen waan idin garab istaagi doonaa, ilaa aan nabad buuxda uga dhalino gobolkeena. Waan hubaa inaan dhowaan ciribtiri doono Al Shabaab iyo kooxaha la midka ah’’, ayuu yiri Madaxweynaha.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in kooxaha argagixisada, sida Al Shabaab ay yihiin kuwo aan ku dhaqmin wax diin ah, falalkoodana ay yihiin kuwo ka dhan ah bani’aadamnimada, sida laga dheehan karo falkii dhowaan ay ku laayeen dad aan waxba galabsan oo ku sugnaa xeebta Liido ee magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta, oo isna halkaasi khudbad ka jeediyay ayaa sheegay in imaatinka Madaxweynaha Soomaaliya ee xuskan uu ka tarjumayo sida labada dal ay uga mideysan yihiin la dagaalanka argagixisada, isagoo intaa ku darey inaan marnaba la isku dhiibi doonin argagixisada.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Nigeria, Muhammadu Buhari, oo isna ka mid ahaa madaxdii lagu casuumay baroor-diiqda ayaa sheegay in caalamka looga baahan yahay inuu u midoobo la dagaalanka argagixisada iyo xagjirnimada.
Kulanka baroor-diiqda kadib ayaa Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa uu kulan gaar ah isla magaalada Eldoret kula yeeshay Madaxweynaha Kenya, Uhuru Kenyatta.
Kulankaasi ayaa labada hoggaamiye waxay kaga wadahadleen xiriirka labada dal, amniga gobolka iyo xoojinta iskaashiga ka dhexeeya labada waddan.
Sweden oo laga soo tarxiili doono ilaa 80,000 oo Qaxootigii tegay sannadkii hore
HRW oo cambaaraysay Tacadiyada ay Hay’addaha Ammaanka Kenya u geystaan Qaxootiga Soomaalida